नेपाल आज | रानीपोखरी असरल्ल छोड्नेले के बनाउलान् साततले दरबार ?(भिडियो सहित)
Breaking News भिडियो समाज
२०७२ को महाभूकम्पसंगै देशको ऐतिहासिक धरोहर नुवाकोटको साततले दरबार पनि हल्लियो । दरबारका सम्पूर्ण अवयव काम नलाग्ने भए । दरबार धराप बन्यो । दरबार चिराधरा भएपछि तीन वर्षदेखि मानव प्रवेश बर्जित छ । भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यसको पुनर्निर्माणको अत्तोपत्तो छैन । सरकारी निकायका मानिस टोली टोली भएर आउँछन, फर्कन्छन् । पुर्खाको नासो यसरी बेवारिसे बनेको देख्दा स्थानीयको मन कुँढिएको छ । कहिले कसले बनाइदिने त कहिले कसले यस्तै हावादारी हल्ला यहाँका मानिसको कानमा ठोकिन्छ । तर दरबारको अवस्था झन्झन् बेहाल हुँदै गएको छ ।\_
उनीहरुलाई भूकम्पबाट जोगिएका आफ्ना बालबच्चा खेल्दै जाँदा कतै धराप बनेको दरबार भत्किएर दुर्घटना हुने त हैन भन्ने चिन्ताले स्थानीय अभिभावक पिरोलिएका छन् । चीन सरकारले बनाइदिने भनेर खबर सुनेका उनीहरु प्राथमिकतामा नपरेको देख्दा निरास छन् । जनप्रतिनिधि स्वयं हायलकायल छन् । आफूहरुले अनेक प्रयास गर्दा पनि दरबार पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा आफूखुसी बनाउन मिल्दैन । पुरातत्व विभागले चासो देखाएको छैन् । दरबार हातामै रहेको भैरवी मन्दिर निर्माण धमाधम भइरहँदा दरबारको अत्तोपत्तो छैन् । इतिहास जोगाउने यति महत्वपूर्ण काममा कसले किन ढिला ग-यो, यसको भरपर्दो उत्तर कसैसंग छैन् । इतिहासविद् प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी देशकै ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासीनता अकर्मण्यताको चरम उदाहरण मान्नुहुन्छ ।
नेपाल एकिकरणको बेला गोरखाका राजा नरभूपाल शाहले नुवाकोट एकिकरण गर्न गोरखाबाट वि.सं. १८०० मा आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले तेस्रो पटक १८०१ मा नुवाकोट विजय गरी नुवाकोट दरबारमा बसेर बेलकोटगढी, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर र कीर्तिपुर आक्रमणको योजना बनाएका थिए । नेपालको ‘पश्चिम १ नम्बर’ अन्तर्गत रहेको यस जिल्लाको नामाकरण गोपाल वंशीय शासनकालदेखि नवकोट, नवकोट्य, नवक्वाथ, नौकोटबाट अपभ्रंश हुँदै हालको नुवाकोट रहन गएको ऐतिहासिक अनुश्रुति रहेको छ । यो ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलको निरीक्षण, अवलोकन भ्रमणमा थुप्रै मानिस आउने गरेका छन् । आश्चर्य त के छ भने यही ऐतिहासिक स्थलको सेरोफेरोमा हुर्किएका किशोर वयका युवालाई पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास र यहाँको सम्पदा बारे ज्ञान छैन् । सुनेका छन, तथ्य के हो थाहा छैन् । के भन्छन् त उनीहरु ?
पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरका कालिगढ झिकाई वि.सं. १८१९ मा भव्य नौतले दरबार बनाउन लगाए । पछि नब्बे सालको महा–भूकम्पले दुई तल्ला भत्किएर सात तले मात्र हुन पुगेको थियो । पुरातात्विकविद् डा. साफल्य अमात्यका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा मल्ल राजाहरूले पाँच तल्ला र सर्ववसाधारण जनताले तीन तल्लासम्मको घर बनाउने गरेका थिए । तर उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको घमण्ड तोड्नकै लागि पृथ्वीनारायण शाहले मन्दिर शैलीको नौतले दरबार बनाउन लगाएका हुन् । यसलाई गृष्मकालिन दरबारका रूपमा उपयोग गरी अर्को शीतकालिन दरबारका रूपमा लिन सकिन्छ । वि.सं. १८२२ मा नुवाकोटकै शेरामा अर्को शेरा दरबारको निर्माण भएको थियो । सात तला रहेको बार्दलीबाट आक्रमणकारीलाई टाढैबाट देख्न सकिने र युद्घ बन्दी नियन्त्रणमा लिई यही दरबारमा थुनिन्थ्यो । वास्तुकलाका दृष्टिले पनि दरबार उच्च महत्वको मानिन्छ ।
यस दरबार अघिल्तिरको तिलिङ्गा घर जसलाई पछि गएर गारद घर भन्न थालियो । साथै उत्तर पूर्वी कुनाको रणबहादुर शाहको बैठक घर पनि शाह कालमा निर्माण भएको थियो । यसको पुनः निर्माणतर्फ सरकारले चासो राखेको देखिदैन । मल्लकालिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा प्रसिद्घ भैरवी मन्दिर र सिन्दुरे जात्रा (नुवाकोट) लगायत तलेजु मन्दिर, नारायण तथा विष्णुको मन्दिर, नारायण जात्रा, सिपाही जात्रा, रोपाइँ जात्रा, टाकटुके जात्रा र लाखे जात्रा आदि प्रमुख मानिन्छ । यी बाहेक अन्य मन्दिर, पाटी–पौवा, डबलीहरू पनि यहाँ नभएका हैनन् । गत वि.सं. २०२० सालको सदरमुकाम स्थानान्तरण सँगसँगै केही साँस्कृतिक परम्परा लोप हुँदै गएका छन् । जुन दुःख लाग्दो विषय हो ।
मल्लकालमा उपत्यकाबाट बसाई सरेर आएका नेवार समुदायले आफ्ना टोलको नाम काठमाडौंजस्तै इन्द्रचोक, ब्रह्मटोल, भूटोल आदि राखेका थिए । जुन अझै कायम छ ।
रानीपोखरी नुवाकोटको साततले दरबार